IBM Smarter Commerce: Yepamberi Yemagariro Ongororo Platform | Martech Zone
IBM Yakangwara Commerce: Yepamberi Yemagariro Ongororo Platform
NeChishanu, Gunyana 27, 2013 NeChishanu, Gunyana 27, 2013 Douglas Karr
IBM's Njere Kutengesa masevhisi akashanduka kuita zvebhizinesi uye vari kunyatso kutora nzira mbiri uye nhare. Vavariro yeAdvanced Social Analytics Platform ndeyekusimudzira kuita kwemunhu uchishandisa simba renhau rezvenhau uye data hombe.
Iyo IBM Yakangwara Commerce yakafambira mberi munharaunda analytics papuratifomu migodhi uye inokohwa mutengi maficha tsoka uye inosanganisa huchenjeri hwebhizinesi kuti ishandire zvinokurudzirwa. Kubatanidza tsoka yemutengi nehukama hwehukama kunopa mukana wekufungidzira wekuita sarudzo dzinobatsira uye zvinokugonesa kugadzirisa kusangana nevatengi vako.
Pfungwa dzeAdvanced Social Analytics Platform:
Inodzora tsoka yemutengi yemagariro kubatsira kugadzira matsva emari yemari uye kuwedzera upsell uye kuyambuka kutengesa kutengesa nekupa zvimwe zvakafambiswa zvinokurudzirwa.
Inovandudza kuvimbika uye inofungidzira vatengi vako zvavanoda nekurumbidza zvigadzirwa zvinovimbwa nemutengi pasocial network.
Inowedzera kunzwisiswa kwechigadzirwa uye kugutsikana kwevatengi nekudzokorora kupfupisa uye kuongorora kwemanzwiro kwakabviswa kubva pasocial network.
Tags: Yepamberi Yemagariro Ongororo PlatformASAPbig datakomesiIBMIBM Yakangwara CommerceNjere Commercezvekutengeseranaevanhu vezvenhau